Dibiga ugu weyn Australia oo cid gowracda la waayay - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka GEOFF PEARSON
Image caption Dibiga ayaa la waayay cid iibsata
Dibigan ayaa daaqa cawska, isagoo joog ahaan ka sareeya lo'da kale ee lagu xanaaneeyo galbeedka dalka Australia. Culeyska dibigan oo gaaraya 1,400 kilo, isagoo dherarkiisu na yahay 6 fiit, da'diisu na tahay toddobo sano ayaa waxaa la rumeesanyahay inuu yahay dibiga ugu weyn dalka Australia oo ay ku nool yihiin malaayin lo' ah.
Milkiilaha dibigan ayaa markii hore u soo iibsaday, si uu hordhaan ugu noqdo xoolaha kale, waxaana la dhufaanay ama laga tumay xininyaha da'diisu markay heyd sanad.
''Mar walba waxaa uu ahaa neef aad uga weyn lo'da kale, neefafkii lamidka ahaa iyagoo da' yar ayaa la gowracay, isaga na beec ayaa lagu la'yahay, marka waxaana go'aansaday in faraha laga qaado'' waxaa sidaasi saxaafadda u sheegay Mr Pearson oo ah ninka iskaleh dibiga.
Ninkan ayaa waxaa kale oo uu sheegay in ay ay soo mareen neefaf badan oo lo' ah, uu na ogaaday in dibigan uu aad u koroya, haatan na uu ka quustay in la iibsado, madaama uu aad u weynaaday.
Mr Pearson oo xanaaneysta lo' ay tiradeedu dhantahay labaatan kun ayaa sheegay in marnaba uusan ku fikirin in uu sidaasi u weynaan doono.